အာဇာနည်မျိုးသေရိုးမရှိ: ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲ... ပေါ်ကုန်ပြီ
Chitthu Sky's photo.
တကယ်တော့ အမေရိကားလို ဥရောပလို ဒေသတွေက နိုင်ငံကြီးတွေက သတင်းထောက်တွေနဲ့ အင်တာဗျူးရင် အရမ်းသတိထားရပါတယ်... အရမ်းလဲ ကြောက်စရာကောင်းပါတယ်၊
သူတို့တတွေက မေးခွန်းတွေကို ဘယ်တော့မှ တိုက်ရိုက်မမေးပါဘူး... ဒါပေမယ် မေးခွန်း ၃ ခုလောက်မေးပြီးရင်တော့ ဖြေထားတဲ့ အဖြေ ၃ ခုကို ပေါင်းရေးလိုက်ရင် အဖြေက တခုတည်းဖြစ်နေတတ်တယ်...၊ အဲ့ဒါက ဒီနေ့သတင်းဌာနကြီးများလောကမှာ အလွန်အသုံးဝင်နေတဲ့ အင်တာဗျူး စနစ် ၊
ဗိုလ်ရွှေမန်းက ပြီးခဲတဲ့ ရက်ပိုင်းအတွင်းတွေတုန်းက အမေရိကန်နိုင်ငံမှာ တော်တော်လေး အင်တာဗျူးတွေ လုပ်ခဲ့ပါတယ်...၊
မြန်မာပြည်မှာက ရခိုင်ပြည်နယ်အရေးလူသတ်မှု့၊ မိတ္ထီလာအရေးလူသတ်မှု့၊ ဥက္ကံအရေးလူသတ်မှုတွေနဲ့ ထိုနယ်တွေအပါအ၀င် လာရှိုးပဋိပက္ခအစရှိသည်တို့ မီးရှို့မှုတွေက မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ကမ္ဘာ့သတင်းတွေက ကြီးစိုးထားခဲ့သလို့....၊
ကမ္ဘာကျော် အကြမ်းဖက် လူသတ်မှု့တွေထဲမှာ အရင်က မွတ်စလင်အကြမ်းဖက်များက ခေါင်းဖြတ်သတ်မှု့၊ သေနတ်နဲ့ နားထင်ကိုတေ့ပြီး ပစ်ခတ်သတ်မှု့၊ အမဲနိုင်ငံတခုမှာ အဖိုးကြီးနှင့် အဖွားကြီး ၂ ဦးကို အရှင်လတ်လတ် မီးရှို့သတ်မှု့ တွေက ကမ္ဘာကြီးကို အံသြတုန်လှုပ် မုန်းတီးစက်ဆုတ်စရာအဖြစ် တည်ရှိခဲ့သော်လည်း...အဲ့ဒါတွေက ၁၀ စုနှစ်နီးပါးလောက် ကျန်ခဲ့သလိုရှိနေစဉ်မှာ...၊
ဗုဒ္ဓဘာသာ မြန်မာနိုင်ငံမှာ အရှင်လတ်လတ် တောင်ကုတ်မှာ ရဲတင်းနှင့် ခေါင်းကို ခုတ်ပိုင်းပြီး သတ်ဖြတ်မှု့များ၊ မိတ္ထီလာမှာ အရှင်လတ်လတ် တုတ်များနှင့် အလဲအကွဲရိုက်ပြီး အရှင်လတ်လတ် မီးရှို့သတ်ဖြတ်တာတွေက ကမ္ဘာ့သတင်းစာမျက်နှာတွေပေါ်မှာ လွန်ခဲ့တဲ့ ၁၀ နှစ်ကျော်က အာဖဂန်နိုင်ငံလို ကြောက်စရာကောင်းတဲ့ အစွန်းရောက်တွေ ကြီးစိုးတဲ့ မြန်မာပြည်အဖြစ် ထိတ်လန့်တုန်လှုပ်စရာ မြန်မာပြည်အဖြစ် အမည်းဆိုးနဲ့ ချက်ချင်းလက်ငင်း ကြော်ကြားလာပါတော့တယ်...၊
ဒီကြားထဲမှာ အမျိုးသားရေးကို ဘန်းပြပြီးတော့ အာဏာတည်မြဲရေး လုပ်ဆောင်နေကြတဲ့ စစ်အုပ်စုရဲ့ ယုတ်မာမှု့တွေကြောင့် ဘုန်တော်ကြီးများရဲ့ ဘာသာရေးလုပ်ဆောင်မှု့တွေနှင့် ( ၉၆၉ ) ဘာသာရေး ၀ံသာနုလုပ်ရှားမှု့တွေကို ကာဗာယူပြီး နိုင်ငံရေးတတ်သိနားလည်သူတွေ အခြေအနေတွေကို သဘောပေါက်နေသူတွေကို အပြောခက်အောင် ဘုန်းကြီးဒိုင်းနဲ့ မိုက်ရိုင်းခဲ့ကြတာကို ကောင်းကောင်းတွေ့မြင်နေခဲ့ရပါတယ်....၊
ဘုန်းကြီးဒိုင်းကိုင်ဆောင်သူ အမျိုးသားရေး လုပ်ကြံသူများက လူသတ်မှု့တွေပြုလုပ်ပြီး ကြေညာသွားတာ ၉၆၉ ၊ လူတွေကို အရှင်လတ်လတ် မီးရှို့သတ်ပြီး ကြေညာသွားတာ ၉၆၉ ၊ ရပ်ကွက်ကြီးလိုက် ပြာကျသွားအောင် မီးတွေရှို့ပြီး ကြေညာသွားတာ ၉၆၉ ၊ အဲ့ဒီလိုနဲ့ ကမ္ဘာကျော်တဲ့ လူဆိုးကြီးအဖြစ် ၉၆၉ ဟာ အမည်ဆိုးကြီးနဲ့ ကျော်ကြားလာခဲ့ပါတော့တယ်....၊
ဗိုလ်ရွှေမန်းက အမေရိကန်ကို ရောက်တော့ သတင်းဌာန ဗျူးဆရာကြီးတွေက ၁ = အရှင်လတ်လတ် မီးရှို့သတ်ဖြတ်ခံရမှု့တွေက ဘာကြောင့်လဲလို့မေးလိုက်တယ်...
ဗိုလ်ရွှေမန်းဖြေပြသွားတာက လူတစုရဲ့ အကြမ်းဖက် ဘာသာရေး လှုပ်ရှားမှာတွေကြောင့်...တဲ့၊
၂ = သတင်းဌာနတွေကမေးတယ်... ( ၉၆၉ ) က ဘယ်သူတွေဦးစီးတာလဲတဲ့ .... ဗိုလ်ရွှေမန်းကဖြေတယ်... ဘုန်းတော်ကြီးတွေပါတဲ့.....၊
၃ = အကြမ်းဖက်တဲ့ ဘယ်လိုအဖွဲ့အစည်းတွေကို အရေးယူဖို့ ဆုံဖြတ်ထားလဲတဲ့...၊ ဗိုလ်ရွှေမန်းက ဖြေတယ်... ( ၉၆၉ )တွေကိုတော့ အရေးယူဖို့ အမိန့်ပေးထားခဲ့ပါပြီးတဲ့၊
အဲ့ဒီ အဖြေ ၃ ခုကို တခုတည်းပေါင်းစပ်လိုက်တော့....
လူတစု အကြမ်းဖက် ဘာသာရေးလှုပ်ရှားမှုတွေကြောင့် ဘုန်းတော်ကြီးတွေပါတဲ့ ( ၉၆၉ )တွေကိုတော့ အရေးယူဖို့ အမိန့်ပေးထားခဲပါတယ်.....တဲ့ ဗျာ.....။
တရားခံ ဘယ်သူလဲဟေ့.... တရားခံ ဘယ်သူလဲဟေ့....။
Myanmar Defense League - MDLshared Chitthu Sky's photo.
Like · · 1921 ·4hours ago ·
Tun Wai shared Chitthu Sky'sphoto.
Like · · 54332 · 15 hours ago ·
ပေးပို့တင်ပြသူ အာလူးလေး at 7:20 PM Email This BlogThis! Share to Twitter Share to Facebook